Mendri-pihetsehan'ny fanenan-tsindrim-peo ny savony sy ny shampoo - Infinity-Electronic
HomeNewsMendri-pihetsehan'ny fanenan-tsindrim-peo ny savony sy ny shampoo
Mendri-pihetsehan'ny fanenan-tsindrim-peo ny savony sy ny shampoo
Nantsoina LPS33W, fitaovana IPx8 voamarina dia voaaro amin'ny ganika matevina ao anatiny, ary voaporofo fa tohina: "rano salady, chlorine, bromine, vovobony toy ny savony tanana sy shampoo, e-liquids ary fanafody mahazatra indostrialy toy ny n-pentane," hoy i ST.
Ny fonosana dia cylindrical (3.3mm isam-bolana x 2.9mm), ary mamolavola, mba hanamaivana ny fampiasana O-pianana rehefa ilaina ny fehezanteny voaisy tombo-koditra, ary ny rindrina dia manohitra mafy.
Araka ny hentitra, ny gela dia rôformana propriétaires, ary ny toetoetrany, miaraka amin'ny fananganana ny fananganana siantika, dia hahatratra 0,008 hPa ny fihenan'ny tsindry RMS.
"Ny fahatsapana ho an'ny famerenana ny rivotra manelingelina mandritra ny fivoriambe dia ambany ihany koa ambany, manodinkodina tsy mihoatra ny 2 hPa ary mahazo ny fahamendrehana ara-dalàna amin'ny 72 ora," hoy ny ST. "Ny fandoavana onjam-peo dia mihazona ny fahamendrehana eo amin'ny ± 3 hPa amin'ny alàlan'ny fandrefesana hatramin'ny 0 ° C hatramin'ny 65 ° C."
Ny firafitra malefaka dia kely dia mistery, miaraka amin'ny fananana mekanika izay omena ao amin'ny Takela-daza (Tabilao 9)
Ny sanda famarotana amin'ny asa dia voatahiry ao anaty rafitra tsy misy lozam-pifamoivoizana, ary navarina ho an'ny rejisitra amin'ny famerenana ny fepetra ara-dalàna. Tsy ilaina intsony ny fanoratana.
Ny vokatra dia 15μA amin'ny 'avoakany', 3μA amin'ny tsy fahampian'ny herinaratra ary 1μA raha mihidy.
Ny 128-bit FIFO dia mitahiry hatramin'ny 40 ho an'ny tsindry sy tsimok'aretina 32bit, ny fampihenana ny hafanan'ny mpampiofana MCU, ka ahafahan'ny mpampiantrano mamita bebe kokoa sy mamonjy hery.
Ny fanampiana dia 1.7 hatramin'ny 3.6V, ary izaho2Ny serasera C sy SPI dia ampiasaina, toy ny sivana ambany.
Nanomboka ny famokarana.